မြွေတောင်၊ ဖားတောင် သတ္တုစီမံကိန်း ဒေသခံများ သဘောထား ရယူပြီးမှ အကောင်ထည်ဖော်မည် - Khonumthung Media Group
You are at:Home»Headline»မြွေတောင်၊ ဖားတောင် သတ္တုစီမံကိန်း ဒေသခံများ သဘောထား ရယူပြီးမှ အကောင်ထည်ဖော်မည်
By admin on	 June 20, 2014 Headline
ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ်ရှိ မြွေတောင်၊ ဖားတောင် နီကယ်သတ္တုတွင်း စီမံကိန်းကို ဒေသခံပြည်သူများထံ ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ရှင်းလင်းတင်ပြ၍ သဘောထား ရယူပြီးမှသာ စာချုပ်စာတမ်းနှင့်အတူ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် မည်ဟု ပြည်ထောင်စု သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုဝန်ကြီး ဦးသန်းထွန်းအောင်ကပြောသည်။
နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပလျက်ရှိသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၄ ရက်မြောက်နေ့) ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့က ချင်းအမျိူးသားဒီမိုကရစ်တစ်ပါတီမှ အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဦးစတီဗင်ထာဘိတ်မှ “ ချင်းပြည် နယ် တီးတိန်မြို့နယ် မြွေတောင်၊ ဖားတောင် ဒေသတွင် နီကယ်သတ္တုထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအတွက် ကန်ထရိုက် ယူထားသည့် North Mining Investment Co.ltd. (NMIC) ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအပေါ် ပြန်လည် သုံးသပ်ပေးရန်’’ ဆိုသည့်မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ္တုတွင်း ဒုဝန်ကြီးက ယခုကဲ့သို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
North Mining Investment Co.Ltd. (NMIC) မှ စမ်းသပ်လေ့လာတင်ပြသော ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာမှု အစီရင်ခံစာသည် စီစစ်ဆောင်ရွက်ဆဲအဆင့်တွင်သာရှိပြီး၊ ပညာရှင်များ၏ စီစစ်အတည်ပြုချက်ရရှိပြီးပါက နောင် တချိန်တွင် ပြသနာ များမပေါ်ပေါက်စေရန် ချင်းပြည်နယ် နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ ဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၊
ချင်းပြည်နယ် နှင့် စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအပါအ၀င် မြွေတောင်ဒေသရှိ ဒေသခံပြည်သူလူထုများအား ပွင့်လင်းမြင် သာစွာ ရှင်းလင်းတင်၍ သဘောထားရယူပြီးမှသာ စာချုပ်ချပ်ဆိုကာ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်သွား မည်ဟု ဒုဝန်ကြီးက ဦးစတီဗင် ထာဘိတ်၏ မေးခွန်ကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် မြွေတောင်၊ ဖားတောင် နီကယ်သတ္တုစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး နှင့် သဘာဝနှင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးအတွက် တူးဖော်ထုတ်လုပ်မည့် နည်းလမ်းများကို စီစစ်ခြင်းနှင့် ဒေသခံများ၏ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး၊ မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် အာမခံပေးနိုင်မှုရှိစေရန်
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရေး ရန်ပုံငွေ နှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရန်ပုံငွေများအား စနစ်တကျထားရှိနိုင်ရေးအတွက် North Mining Investment အဖွဲ့ နှင့် နည်း ပညာကော်မတီအဖွဲ့များ ပြန်လည်စီစစ်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်သည်ဟု ဒုဝန်ကြီးက ပြောဆိုကြောင်း ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းနေ့စဉ် သတင်းစာ တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အကျိူးအမြတ်ခွဲဝေမှုပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဒုဝန်ကြီးက “ ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ခွဲဝေခံစားသည့်စနစ်(သို့မဟုတ်) နှစ်ဦးနှစ် ဖက် ထည့်ဝင်မှုအပေါ် အခြေခံသည့် အမြတ် ခွဲဝေ မှုစနစ်(သို့မဟုတ်) အခြားနည်း အကျိူးအမြတ်ခွဲဝေ ခံစားသည့်စ နစ်တို့ဖြင့် ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆို မည်’’ ဟု ပြောဆို သည်။
အစကနဦးတွင် မြွေတောင်၊ဖားတောင်သတ္တုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအား တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်းမ မရှိဘဲ တရုတ်ပြည် သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ Kingbao Mining Ltd က မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြု ချက်အရ နီကယ်သတ္တု စမ်းသပ်တိုင်းတာရေး နှင့် ဖြစ်မြောက်နိုင်င စွမ်းလေ့လာမှုလုပ်ငန်းကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နည်း ပညာအား နည်းမှုရှိသဖြင့်ရပ်နားခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်တွင် North Mining Investment Co.Ltd. (NMIC) မှ ယင်းဒေသတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုကြောင်း သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနသို့ လျှောက်ထားလာသဖြင့် မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေ၊
နည်းဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အညီ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်ဟု ဒုဝန်ကြီးကပြောသည်။
မြွေတောင်၊ ဖားတောင်ဒေသ နီကယ်သတ္တုထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာမှုကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မ ရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် NMIC က ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာအရ သတ္တုသိုက် ပမာဏ ၄၂ သန်းတန်ခန့်ရှိပြီး နီကယ် ၁ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ သံ ၁၆ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ ခရိုမီယမ် ၀ ဒသမ ၈၈ ရာခိုင်နှုန်း၊
ကယ်စီ ယမ်အောက်ဆိုက် ၀ ဒသမ ၇၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ မဂ္ဂနီစီယမ်အောက်ဆိုက် ၂၁ ဒသမ ၇၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ အလူမီနီ ယမ်အောက်ဆိုက် ၂ ဒသမ ၈၇ ရာခိုင် နှုန်း၊ ဆီလီကာ
၃၉ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကာဗွန် ၀ ဒသမ ၀၄၄ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ကာ နီကယ်သတ္တုရိုင်းမှ သတ္တုသန့် စင်ထုတ် လုပ်မှုဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေ သည် နည်းပညာ ကော်မတီအ ဖွဲ့ဖြင့် စီစစ်ဆောင်ရွက် ဆဲဖြစ်သည်ဟု သတ္တုတွင်း ဒုဝန်ကြီးကပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိသော မြွေတောင်၊ ဖားတောင် ခြေရင်းတွင် ကျေးရွာပေါင်း ၃၀ ခန့်ရှိနေပြီး စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်လျှင် ကျေး ရွာပြောင်းရွှေခံရမှု၊ လယ်ယာမြေပျက်စီးမှုများ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိလာနိုင်သည်ဟု ဒေသခံများ နှင့် အရပ်ဘက်ချင်း လူမှုအဖွဲ့အ စည်းများက ထောက်ပြထားကြသည်။
စီမံကိန်း၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ဒေသခံများ မသိရှိခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သယံဇာတအ ကျိုးအ မြတ်ခွဲဝေ ရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဥပဒေတစ်ခု ပေါ်ထွက် လာရန် ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သော အခြေ အနေဖြစ်ခြင်း၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင်ပျက်စီးမှု တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းများကို နိုင်ငံတကာမှ အဖွဲ့အစည်း များအား တာဝန်ပေး သင့်ကြောင်း၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံး မှုများ ပေါ်ပေါက်လာလျှင် နစ်နာသူများအား နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများအတိုင်း လျော် ကြေးပေးရန်နှင့် စီမံကိန်းအတွက် ပေးထားသော ကတိက ၀တ်များအား စောင့် ကြည့်လေ့လာသော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုကိုပါ ဖွဲ့စည်းပေးရန် ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက ချင်းပါတီ လေးခုက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ခဲ့သေး သည်။